लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको स्वतन्त्र सञ्चालकमा मानन्धर नियुक्त
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको स्वतन्त्र सञ्चालकमा निर्मला देवी मानन्धर नियुक्त भएकि छन् । कम्पनीको भदौ ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मानन्धरलाई सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई आगामी ४ वर्षका लागि सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको हो । ...
बीमा समितिले बीमा सर्भेयर तालिम सञ्चालन गर्ने, को–को हुन पाउँछन सहभागी ?
काठमाण्डौ । बीमा समितिले बीमा सर्भेयर तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । समितिले एक सूचना जारी गर्दै बीमा सर्भेयर तालिम सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको हो । समितिले सेर्भेयर तालिममा सहभागी हुन इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकहरुलाई समितिको वेभसाइट www.nib.gov.np को एप्लिकेसन लिंकमा गई आवेदन फारम भर्न सक्ने जनाएको छ । यसरी फारम भरी आएकाहरुमध्ये २५...
नेको इन्स्योरेन्सको खुद नाफा ५४ करोड बढी, इपीएस रु.४१.०४
काठमाण्डौ । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा १ अर्ब ६३ करोड २८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८.५३ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन १ अर्ब २७ करोड ३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले लगानी...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सद्वारा मार्केटिङ सम्बन्धी तालिम सम्पन्न
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले मार्केटिङ सम्बन्धी तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीको प्रदेश न.१ मा मार्केटिङ सम्बन्धी तालिम तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । उक्त तालिम कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराईले प्रदान गरेका हुन् । तालिममा प्रशासन प्रमुख किरण मुढभरी र...
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीद्वारा ३४.८७ करोड मुनाफा आर्जन, बीमा कोषको आकार ४१.१३%ले बढाउन सफल
काठमाण्डौ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा ७१ करोड ४२ लाख ७ हजार रुपैयाँ खुद बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.६९ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन ६६ करोड ९३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले लगानी कर्जा तथा...
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको सीईओमा विरेन्द्र वैदवार क्षेत्री नियुक्त
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओमा)विरेन्द्र वैदवार क्षेत्री नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको भदौ २ गते बसेको सञ्चालक समितिको १७७ औँ बैठकले क्षेत्रीलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले उनलाई आगामी चार वर्षका लागि कम्पनीको सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । नेपालको निर्जीवन बीमा...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा सूचीकृत भएको छ । आज(भदौ २ गते)कम्पनीको ५ प्रतिशत बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । नेप्सेमा कम्पनीको ५ प्रतिशतले हुन आउने ५ लाख ७० हजार ९ सय कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७...
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको स्वतन्त्र सञ्चालकमा शर्मा नियुक्त
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको स्वतन्त्र सञ्चालकमा हसना शर्मा नियुक्त भएकि छन् । कम्पनीको साउन २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शर्मालाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई आगामी चार वर्षका लागि स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा नियुक्त गरिएको कम्पनीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । ...
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको मुनाफा ४३.५७%ले घट्यो, बीमाशुल्क आर्जनमा झिनो वृद्धि
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा २२ करोड ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.०८ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन २२ करोड ४५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले लगानी कर्जा तथा अन्यबाट हुने...
शिखर इन्स्योरेन्सद्वारा ४७.५७ करोड मुनाफा आर्जन, इपिएस रु.२७.०५
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा १ अर्ब २९ करोड ७६ लाख १ हजार ३६८ रुपैयाँ खुद बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.४५ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन १ अर्ब १८ करोड ५४ लाख ६८ हजार ५७१ रुपैयाँ थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले...
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको मुनाफा १०.३५%ले घट्यो, अन्य सूचकको अवस्था कस्तो ?
काठमाण्डौ । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा २५ करोड ९ लाख २० हजार रुपैयाँ खुद बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.९६ प्रतिशतले कम हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन २६ करोड १२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले लगानी कर्जा तथा...
अजोड इन्स्योरेन्सद्वारा रु.३८.२८ करोड बीमाशुल्क आर्जन, मुनाफा कतिले वृद्धि ?
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा ३८ करोड २८ लाख १५ हजार रुपैयाँ खुद बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६.३८ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीको खुद बिमाशुल्क आर्जन ३० करोड २९ लाख ५ हजार रुपैयाँ थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले लगानी कर्जा तथा अन्यबाट...
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सेयर संरचना परिवर्तन, ९ लाख कित्ता बढी संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिणत
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर संरचना परिवर्तन गरिएको छ । सेयर संरचना परिवर्तन गर्दै कम्पनीको ९ लाख कित्ता बढी संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिणत गरिएको छ। कम्पनीको ९ लाख ९७ हजार ६९१.९ कित्ता संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको हो। सेयर संरचना परिवर्तनपश्चात कम्पनीमा संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्व ५१...
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयरमा बोलपत्र आवेदन पेश गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल)लिमिटेडको संस्थागत समूहको ५ लाख कित्ता बढी सेयरमा आवेदन दिने आज(साउन २२ गते) अन्तिम दिन रहेको छ । राखिएको छ। कम्पनीको संस्थागत समूहको ५ लाख ४२ हजार ९६५ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। यो सेयर खरिदका लागि विद्यमान संस्थापकहरु वा जो कोहि व्यक्ति, कम्पनी, तथा संघ संस्थाहरुले...